Abakhiqizi beTelecom | I-China Telecom Factory & Abahlinzeki
okunciphise amandla RF & Microwave Power amplifier
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB ye-Bidirectional RF & Microwave Power amplifier. EPandawill, siyakuqonda ukuxakaniseka nenselelo kule mboni, yingakho-ke sesibe ngochwepheshe bezinsizakalo zokukhiqiza ngogesi (EMS) zokuxhumana ngocingo.
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB wemishini yokusakaza ye-Bidirectional. EPandawill, siyakuqonda ukuxakaniseka nenselelo kule mboni, yingakho-ke sesibe ngochwepheshe bezinsizakalo zokukhiqiza ngogesi (EMS) zokuxhumana ngocingo.
Le iphrojekthi yomhlangano we-PCB webhodi ye-Optical Networking. EPandawill, siyakuqonda ukuxakaniseka nenselelo kule mboni, yingakho-ke sesibe ngochwepheshe bezinsizakalo zokukhiqiza ngogesi (EMS) zokuxhumana ngocingo.